Nọvemba 2021 - Ibe ụlọ
Ị maara na ọ bụ ezigbo nkwekọrịta mgbe November ga-abịa. Okpomọkụ na-agbada, Ekele fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a, ezumike na-abịa n'oge na-adịghị anya, na njedebe nke afọ na-arụsi ọrụ ike yiri ka ọ dị nso. Mana ọ dịghị njọ ma ọlị. Ụbọchị obi ebere ụwa, ụbọchị ndị agha agha na, n'ezie ọtụtụ ọkacha mmasị ndị mmadụ, Ekele, bụ ụbọchị mgbe anyị niile nwere ike iku ume iji tụgharịa uche ma nwee ekele maka ndị mmadụ na ndụ ndị gbara anyị gburugburu. Mgbe niile na-akpachara anya maka COVID-19, n'ezie!
Enwere 'mbụ' ole na ole mere n'ọnwa a ma a bịa n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa. Nọvemba hụrụ mmeghe nke ụlọ akwụkwọ ahụike izizi maka ụmụ nwanyị na Boston. Na South Africa, e mere ntuli aka nke agbụrụ niile nke mbụ. Britain, karịsịa London, bụkwa ebe e meghere ụzọ ụgbọ oloko nke mbụ nwere ọkụ n'okpuru ala. Agha Opium mbụ dị n'etiti China na Britain malitekwara n'ime ọnwa a. Carl Stokes, onye isi obodo Cleveland, Ohio, bụ onye mbụ Afrịka America ghọrọ onye isi obodo na US na L. Douglas Wilder ghọrọ gọvanọ mbụ Afrịka America na akụkọ ntolite US mgbe a họpụtara ya dịka gọvanọ Virginia. Ireland nwetakwara onye isi oche nwanyị mbụ ya na Mary Robinson ka a họpụtara na Nọvemba 1990. Ihe omume dị mkpa mekwara n'ọhịa ọgwụ, na mmịnye ọbara nke mbụ nke mere na Great Britain site na iji nkịta abụọ. Nchọpụta x-ray nke Wilhelm Roentgen mekwara na Nọvemba.
Ndị ọzọ mbụ gụnyere: mbụ mbipụta nke Akwụkwọ akụkọ izu ụka New York, Howard Hughes' mbụ na naanị efe ụgbọ elu ụgbọ elu, nke mbụ transcontinental ụgbọ elu gafee America, na ụwa mbụ mmadụ bi ohere Capsule ulo oru site Soviet Russia. Onye isi ala Franklin D. Roosevelt ka a họpụtara n'ọkwa nke anọ, na-emeri onye ya na ya na-akpakọrịta n'oge ahụ bụ Thomas E. Dewey na Brazil ghọkwara otu mba.
Ụfọdụ nnukwu mmemme ndọrọ ndọrọ ọchịchị mekwara na Nọvemba. Ndị a gụnyere nguzobe nke European Union, nnwere onwe nke Panama, njedebe nke agha Franco-Spanish (Treaty of Pyrenees) na nguzobe nke US Marine Corps dị ka akụkụ nke ndị agha mmiri US.
Ụbọchị ọmụmụ nke ndị ama ama na Nọvemba:
Nọvemba 2, 1734: Daniel Boone: Onye ọsụ ụzọ America na dike. Kasị mara maka ihe omume ya mere ka ọ bụrụ onye ama ama n'ofe United States na Europe.
Nọvemba 7, 1867: Marie Curie: Onye ama ama Polish-French Physicist, otu n'ime ndị ọkà mmụta sayensị kachasị na kacha nwee mmetụta n'oge niile. Curie bụ nwanyị mbụ nwetara Nrite Nobel, nwanyị mbụ na naanị nwanyị meriri ya ugboro abụọ, na naanị otu onye n'akụkọ ihe mere eme meriri ya na ngalaba sayensị abụọ dị iche iche. A maara ya nke ọma maka nyocha ya na redioactivity.
Nọvemba 9, 1934: Carl Sagan: American Astronomer na ihe dị mkpa ma a bịa na sayensị. O nyere nnukwu onyinye na ngalaba nke ndụ extraterrestrial na mmetụta griin haus. Ọ bụ onye na-akwado ịkwatu ngwa agha nuklia ma bụrụ onye a na-akwụ ụgwọ maka ịchịkọta ozi anụ ahụ nke mbụ ezigara na mbara igwe.
Ọnwa Iri na Otu 15, 1887: Georgia O'Keefe: Onye omenkà amuru America, Amara dị ka "Nne nke American Modernism". A maara ya nke ọma maka nka nkịtị ya, ọkachasị ọmarịcha ifuru ya nso. A makwaara O'Keefe maka ọdịdị ala New Mexico ya na New York Skyscrapers.
Ụfọdụ Ntụgharị Asụsụ, Ntụgharị Asụsụ na Ọrụ Mgbasa Ozi Emechara n'August
Nọvemba gosipụtara na ọ bụ ọnwa na-arụsi ọrụ ike nke gangbuster zuru oke ọrụ na-atọ ụtọ, oge njedebe siri ike na ọrụ dịgasị iche iche maka ụlọ ọrụ anyị. Ọbụlagodi na COVID-19 ka na-ezobe gburugburu anyị kpuchiri ọrụ dị iche iche n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na asụsụ.
Ngalaba ntụgharị na-aga n'ihu na-ahụ mmụba mgbe niile na ntụgharị saịtị na Virtual, n'otu akụkụ, ekele maka ọgwụ mgbochi megide Covid na iwu dị n'ọnọdụ iji gbochie ya ịgbasa na ntụkwasị obi azụmaahịa zuru oke nke akụ na ụba.
Ngalaba ntụgharị okwu anyị nyere ụbọchị 3 nke ntụgharị asụsụ Japanese na saịtị maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe omume mba na ụlọ ọrụ egwuregwu. Anyị nyekwara ndị ntụgharị okwu n'otu oge 3 mebere Turkish maka ụbọchị 4 nke ọzụzụ ịntanetị n'etiti gọọmentị US na Turkey maka ụlọ ọrụ gọọmentị isi. Na mgbakwunye, anyị nyere ụbọchị 3 nke ntụgharị asụsụ Russian na saịtị na Florida maka ọgbakọ nke onye na-eweta mmemme mebere.
Anyị wetara Cantonese, Mandarin, na Spanish ntụgharị asụsụ na saịtị yana asụsụ ogbi nke America maka usoro nzukọ ụbọchị 2 na nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ Las Vegas. Ọrụ ọzọ dị mkpa gụnyere ijikwa ụbọchị 3 na-atụgharị asụsụ Japanese na saịtị maka nnukwu ụlọ ọrụ nyocha sayensị na-arụ ọrụ na genome mmadụ na ngalaba bayoloji. Anyị nyekwara nkọwa asụsụ Spanish dịpụrụ adịpụ nke ọma maka onye nta akụkọ ụlọikpe mba niile maka usoro nkwubi okwu gbasara iwu. Ọzọkwa, anyị nyere ndị ntụgharị asụsụ French mebere 3 maka webinar ọzụzụ ụbọchị 2 na ngalaba biosafety na nchekwa.
N'ime ọtụtụ mgbasa ozi, anyị malitere nnukwu ndegharị, ntụgharị asụsụ na ọrụ olu maka DOD, site n'otu n'ime ndị na-enye ndị NGO gọọmentị ibe anyị. Ọrụ a gụnyere vidiyo 24 ka edegharị ma tụgharịa gaa na Spanish, French & EU Portuguese, site na ihe karịrị awa 13 nke ọdịyo, yana oge ngwụcha izu 5-6. Ọkọlọtọ nnyefe nke nha a na-ewekarị izu 12-14. Anyị na-akwado ihe ịma aka ahụ ma na-aga n'ihu na-arụpụta ọrụ dị elu n'ime oge njedebe a siri ike.
Anyị na-arụkwa ọrụ na ntụgharị vidiyo Arabic dị mkpa na ntinye ederede maka nnukwu Mahadum Southern na nhazi nke onye ahịa ha bụ ndị agha US. Ọrụ a gụnyere nyocha na njikwa ihe ndị dị ndụ, kemịkalụ na ihe ndị na-adịghị ize ndụ.
Anyị degharịakwara ọtụtụ ajụjụ ọnụ maka netwọk telivishọn site na Spanish gaa na Bekee. Maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu Nevada, anyị degharịrị ma gbapụta awa anọ nke ntị bekee gaa na bekee maka ntinye ha na-abịa.
Ngalaba ntụgharị asụsụ anyị na-aga n'ihu na-enye ọtụtụ ọrụ dị iche iche maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Anyị tụgharịrị asụsụ 20,000 nke nkwekọrịta nyocha ụlọ ọgwụ n'asụsụ Japanese maka otu n'ime ụlọ ọrụ ọgwụ na ngwaọrụ ahụike kacha ama ama n'ụwa. Anyị tụgharịrị asụsụ 16,000 okwu na ọrụ egwuregwu ihuenyo, na nhazi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe mmeri Emmy Award, gaa na EU French, German, Spanish, na Portuguese Portuguese. Maka Red Cross America, anyị jiri nnukwu ọsọ sụgharịa atụmatụ ime ihe gbasara ọdachi 25,000 gaa na Spanish.
Ọzọkwa, maka nnukwu onye na-eweta ọrụ gbasara iwu mba ụwa, anyị tụgharịrị akwụkwọ ịkpọ oku na mkpesa okwu gbasara okwu 25,000 maka ọrụ mba ụwa na Greek maka Greece na Chinese Simplified maka China. Ọrụ anyị na ngalaba ahụike na-aga n'ihu ka anyị na-asụgharị akwụkwọ ntuziaka ngwaọrụ ahụike okwu 25,000 n'asụsụ Hungarian na Slovenian. Na mgbakwunye, anyị tụgharịrị okwu 240,000 nke ozi ahụike metụtara ọtụtụ ọrịa n'ime EU French, Portuguese Portuguese na Spanish maka ọrụ metụtara Ngalaba Nchebe na otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka gọọmentị.